Madheshvani : The voice of Madhesh - जनमतको महाधिवेशन भव्य र सभ्यरूपमा सम्पन्न गर्छौं : अब्दुल खान
० जनमत पार्टीको प्रथम महाधिवेशन नजिकिँदै गएको छ, तयारी कस्तो छ ?
— जनमत पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशन यही चैतको २८ र २९ गते प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधामको बाह्रबिघामा हुन गइरहेको छ । प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनलाई भव्य र सभ्य बनाउनका लागि हामीले तयारी तीव्ररूपमा गरिरहेका छौं । महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समितिहरू निर्माण गरिएको छ, जुन समितिहरूले आआफ्नो तयारी तीव्रताका साथ गरिरहेका छन् ।
० महाधिवेशनको तयारी कतिसम्म भयो त ?
— हाम्रो महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा छ । हाम्रा प्राविधिक तयारीहरू पूरा भइसकेका छन् । हाम्रो महाधिवेशनको तयारी लगभग भइसकेका छन्, तत्कालीनरूपमा गरिने कार्यहरू हुँदैछन् । हाम्रा सबै तहका अधिवेशनहरूसमेत पूरा भइसकेका छन्, कतिपय ठाउँमा हुने क्रममा पनि छन् । हाम्रो महाधिवेशनमा आउने पाहुनाहरूसँग सम्वादमा छौं ।
० जनमतको महाधिवेशनमा कस्ता अतिथिहरू आउँदैछन् त ?
— यो महाधिवेशनमा देशविदेशका अतिथिहरूलाई हामीले बोलाउने तयारी गरिरहेका छौं । खासगरी सबै राजनीतिका दलका नेताहरूलाई हामीले बोलाउने प्रयासमा छौं । यसैगरी, छिमेकी राष्ट्र लगायत अन्य राष्ट्रहरूबाट पनि अतिथि बोलाउने तयारीमा छौं । अन्य देशका अतिथिहरूसँग कुरा भइरहेको छ । उहाँहरूसँग हामीले समय व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरिरहेका छौं ।
० कुन–कुन देशहरूबाट अतिथिहरू आउँदै हुनुहुन्छ ?
— सम्भावना थुप्रै छन् । अहिले फेरि कोभिडको प्रकोप बढ्ने देखिएको छ । हाम्रा छिमेकी राष्टहरू लगायत युरोपियन देशका अतिथिहरूसँग पनि सम्पर्क भइरहेका छन् । खासगरी भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशबाट अतिथिहरू आउने भएका छन् । यो कोरोनाले धेरै समस्या ल्याए थुप्रै अतिथिहरू आउनुहुन्छ । तर अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन कि कुन देशबाट को–को आउने हुन । हामीले अन्य देशका राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्वहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौं ।
० महाधिवेशनमा कतिसम्मको सहभागिता हुनेछ ?
— हामीले करिब २५ देखि ३० हजारसम्म भोलेन्टियर (स्वयम्सेवक) हरू तयार गरिरहेका छौं । महाधिवेशनलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रा जनशक्तिहरू खटिने छन् । त्यसपछि हाम्रो अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू हुनेछन् । हामीले महाधिवेशनमा आम जनसमुदायलाई बोलाएका छैनौं । किनभने अहिले कोरोना फेरि बढ्न थालेको छ । यो महाधिवेशनमा खासगरी जनमत पार्टीका स्वयम्सेवक दस्ता र प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेका छौं ।
० कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न निर्देशन पनि दिएको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त ?
— यस विषयमा हामी अहिले छलफलमा छौं । यस विषयमा हामीले टुंगो लगाइसकेका छैनौं । हाम्रो छलफलबाट के कस्ता निर्णय हुन्छ, त्यसपछि हामी सार्वजनिक गर्नेछौं । यदि नेपालमा पुनः कोरोनाको कहर बढ्न थाल्यो भने हामीले विभिन्न वैकल्पिक उपायहरू अपनाउने छौं । कोरोना बढे पनि हामीले महाधिवेशन स्थगित गर्दैनौं । मापदण्डहरू अपनाइन्छ । कोभिडबाट बच्न अपनाउनुपर्ने मापदण्डहरू अपनाउँदै महाधिवेशनलाई सफल पार्छौं ।
० जनमत पार्टीका अधिकांश सदस्यहरू विदेशमा बस्छन्, उहाँहरू आउनुहुन्छ ?
— जनमत पार्टीका विदेशमा रहेका सबैलाई हामीले आउन आह्वान गरेका छैनौं । केही सदस्यहरू जो प्रमुख नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनु हुन्छ ।
० जनमत पार्टीको विभिन्न पदहरूमा दाबेदारी अथवा उम्मेदवारी कहिलेदेखि हुने ?
— यस विषयमा केही साथीहरूको धारणा आइसकेका छन् । यस विषयमा हामीले छिट्टै नै टुंगो लगाउँछौं । अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचन प्रक्रियालाई अपनाएर टुंगो लाग्नेछन् । हामी लोकतन्त्रलाई मान्ने पार्टी भएकोले हामी त्यहीं प्रक्रिया अपनाउँदा झन् राम्रो हुन्छ ।
० अध्यक्ष डा.सीके राउतलाई सर्वसम्मतले अध्यक्ष बनाउने कि अन्य कोही प्रतिस्पर्धा गर्ने ?
— हामी निर्वाचन प्रक्रियामा जान्छौं । प्रक्रियाअनुसार नै अध्यक्ष पनि चयन हुनेछ । हामीले विधानअनुसार दुई कार्यकालभन्दा बढी कोही पनि अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था गर्छौं । यस विषयमा हामीले महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउँछौं ।
० तपाइँ तत्कालीन स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो, अहिले जनमतको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । तपाइँको दाबेदारी केमा हुनेछ ?
— अहिलेसम्म मैले केही सोच बनाएको छैन । साथीहरूसँग छलफल गर्दैछु । कुनै पनि पदका लागि आफू पनि उपयुक्त र सक्षम हुनुप¥यो । दाबेदारी मात्रै गरेर हुँदैन । पार्टीको लागि जहिले पनि म योगदान गर्नेछु । मलाई कुनै पनि पद नदिए पनि केही फरक पर्दैन । म पदको लागि राजनीति गरेको छैन ।
० जनमत पार्टीले महाधिवेशनका लागि आर्थिक सहयोगको पनि अपिल गरेको थियो, कतिसम्म सहयोग प्राप्त भयो त ?
— महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आर्थिक समिति पनि बनेको छ । अहिलेसम्म कति आर्थिक सहयोग आयो भन्ने कुराको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । तर पनि अहिलेसम्म आएका सहयोग लगभग ३० प्रतिशत प्राप्त भएको अनुमान छ । अझै पनि सहयोग प्राप्त हुने क्रममा जारी नै छ ।
० महाधिवेशनमा कतिसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ?
— हाम्रो महाधिवेशनमा करिब एक करोड २५ लाख रूपैयाँसम्म खर्च हुने हामीले अनुमान गरेका छौं ।